BQ waxay dhimaysaa shaqaalaheeda dayactirka kala bar ERE | Androidsis
BQ waxay dhimaysaa shaqaalaheeda dayactirka kala badh hal ERE
Eder Ferreno | | Bq, Noticias
BQ waa shirkada ugu caansan Isbaanishka mobilka suuqa, marka lagu daro inay tahay mid ka mid ah noocyada ugu iibka badan suuqa qaranka. Laakiin, waxay u muuqataa in kastoo guulahaas la gaadhay, haddana shirkadda lagu qasbay inay shaqada ka joojiso qayb weyn oo ka mid ah shaqaalaheeda. Ugu yaraan shaqaalaha dayactirka. Maaddaama ay la kulmaan faylkooda ugu horreeya ee sharciyeynta shaqada.
ERE-kan waxaa si rasmi ah loo gaarsiiyay jimcihii la soo dhaafay. 85% shaqaalaha ayaa aqbalay heshiiska, sida laga soo xigtay BQ lafteeda. ERE-kan waxay saameysaa oo keliya aagga dayactirka shirkadda. Marka taasi waxay ka socotaa shaqaalaha 141 ee hadda jira ilaa 70.
Sababta tani maahan mid kale oo aan ka aheyn soo gelitaanka hoose ee taleefannada ee dayactirka. Tirada taleefannada loo baahan yahay in la dayactiro ayaa si aad ah hoos ugu dhacday. Marka shirkaddu uma baahna inay haysato dad badan oo ku mashquulsan qaybtaan.
BQ waxay ku andacooneysaa inaysan u baahnayn shaqaale intaa le’eg oo gacanta ku haya dayactirka taleefanka. Taleefannada gacanta ee ay soo saartay shirkadda Isbaanishka ayaa ka tayo wanaagsan. Waxyaabaha sababa iyaga in la dayactiro si aan badnayn. War wanaagsan warqad.
Tan iyo markii ay u maleyneyso taas waxaa jira dhibaatooyin yar oo adeegsadayaasha iibsada casriga casriga ah ee BQ. In kasta oo ay waliba macnaheedu ahayd inay jiraan dad badan oo shaqadooda ku waayey shaqo la’aan ka jirta waaxdan shirkadda. Waxaa la xaqiijiyay in magdhowgu wuxuu noqonayaa 33% sanadkiiba.
Waxaa jiray warar xan yar oo sheegaya in BQ ay raadineysay inay shaqada ka ceyriso shaqaalaheeda si ay dibedda ugala baxdo dayactirka meel ay ka jabanaayeen. Wax ay shirkadda lafteedu beenisay. Tan iyo markii ay shaqada ka eryeen maxaa yeelay culeyska shaqada ayaa aad uga hooseeya. Kaliya waxay dibadda u diraan waqtiyada culeyska shaqada badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » BQ waxay dhimaysaa shaqaalaheeda dayactirka kala badh hal ERE
Sooc iyo tilmaamaha cusub ee Lenovo K5 iyo K5 Play